Milina fanontana, Label lamba, Vahaolana fanontana - VTEX GROUP
Fanapahana & aforeto
Satin Polyester Satin
Tenona Edge Satin
Item miempo mafana
Wax / résin
Azontsika atao ny manohana ny mpanjifantsika amin'ny vidiny lafo,
kalitao milamina sy serivisy tena tsara
Masinina fanontana Flexo an'ny IML
Masinina fanontana Flexo ho an'ny ...
Eco Wax Ribbon dia manolotra ny ...
Fanontam-pirinty ho an'ny milina fanontana Flexo
Fanontam-pirinty ho an'ny Flexo Pri ...
Tsipika fanontana hafanana semi-Auto
Masinina fanontana pirinty ...
Tabilao fanontana lamba feno hafanana feno
Masinina fanontam-pirinty Flexo Miaraka amin'ny famonoana telo ...
Masinina fanontana Flexo Wi ...
Haingam-pandeha Rotary Press
Haingam-pandeha Rotary Press (Sh ...
Taffeta Voahangy Volo Voahangy Voahangy
Voasarimakirana Volo Voahangy Voahangy ...
Fampihenana Medium ho an'ny Flexo Inks
Mampihena ny mpanelanelana ho an'ny Flexo I ...
Masinina fanontam-pirinty Flexo
Masinina fanontana marika kely efijery
XHSW-200 Screen multi-loko ...
Famaritana efijery servocontrol automatique multi-loko ...
Mandeha ho azy Servocontrol Mult ...
Izahay dia marika sinoa tany am-boalohany ho an'ny vahaolana feno amin'ny indostrian'ny fanontana marika
1. Masinina fanontana
2. Fitaovana lamba vita amin'ny lamba
3. TTR kofehy
4. Fanontana pirinty
Ny vokatray dia ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny fonosana, akanjo, fahasalamana ary sakafo. Miara-miasa amin'ireo mpanonta printy malaza eran-tany izahay izay nanjary natoky ny lazanay noho ny milina tena mahomby sy azo atokisana, ary afaka manome soso-kevitra izahay fa manana kalitao tsara ho an'ny entana vita amin'ny lamba, inks ary kofehy famindrana hafanana.
Miarahaba anao izahay hitsidika anay ary hijery ho anao fa manintona anay isan'andro ny fanaovana marika marika fikarakarana!
Mahafantatra bebe kokoa momba anay…
OEKO CERTIFICATE 2020 ho an'ny entana LABEL FABRIC
OEKO Ceart Certificate ho an'ny entana Label Fabric
Fanavaozana ny mari-pahaizana ECO ho an'ny taona 2020
AHOANA NO HAMONJENA NY COVID-19?
Manana sosokevitra matanjaka eto ambany izahay mba hiarovan-tena amin'ny COVID-19, fanandramana avy any China Control: 1. Aza mankany amin'ny toerana misy anao amin'ny besinimaro, indrindra ny habaka, toy ny efi-trano, kioban-trano, sinema, tsena lehibe, ect., ireo karazana toerana mora voan'ny aretina na dia ianao aza manao sarontava. 2. Rehefa mila any ivelany ianao, n ...
VTEX GROUP - VAHAOLANA fanontana pirinty
Izahay dia marika sinoa tany am-boalohany ho an'ny vahaolana feno amin'ny indostrian'ny fanontana marika: * Masinina fanontam-pirinty - Shanghai Xinhu Machinar Co., Ltd. * Fitaovana lamba vita amin'ny lamba - Huzhou XingHong Label Fabric Co., Ltd. * Fidirana fanontam-pirinty Flexo - Inksima matevina Shanghai Flexo Co., Ltd. * Th ...
© Copyright - 2020-2030: VTEX GROUP Zo rehetra voatokana.